Qoor Qoor ma ka baxsan doonaa mashaqada Gaalkacyo? - Caasimada Online
Home Warar Qoor Qoor ma ka baxsan doonaa mashaqada Gaalkacyo?
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa Shalay Galab gaaray Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug halkaas oo lagu dooran doono 11 kamid ah Kuraasta Golaha Shacabka ee ka imaanayo Galmudug.
Sida uu ahaa jadwalkii uu shaaciyey guddiga doorashada ee Galmudug 5 Bisha oo Sabtida Berri ah ku aadan ayuu qorshuhu ahaa in la doorto 6 kamid ah 11-ka Kursi ee taalo Gaalkacyo, laakiin buuq badan ayaa ka dhashay qaar Kuraasta kamid ah oo laga dhigay Kooto Dumar.
Lixda Kursi ee la shaaciyey 3 kamid ah ayaa laga dhigay Kooto Dumar, mid kamid ah horey ayey ugu fadhisay qof Dumar ah waana HOPP#60 oo ay ku fadhisay Ubax Tahliil Warsame.
Reerka Kursigaas leh waxay rajeenayeen in sanadkaan kursigooda laga saaro kootada Dumarka iyadoo sanadkaan guud ahaan beesha Koonfurta degto ay eegeysay in Afarteeda Kursi laga dhigo xisaab rag, laakiin Qoor Qoor wuxuu Kursiga HOPP#60 kusoo celiyey xisaabtii Dumarka.
Kursiga Labaad oo isna buuqa ka taagan yahay waa HOPP#20, Kursigaan waxaa u sharaxnaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga Dalka General Indha Qarashe, waxaa kursigaan ku fadhiyey Shantii Sano ee lasoo dhaafay Xildhibaan Cali Yare, balse si uu aadan Aadan Qoryooley kursi u helo ayaa kursigaan laga dhigay Kooto Dumar, halka Kursiga HOPP#13 laga dhigay Kooto Rag iyadoo loo diyaarinayo Aadan Qoryooley oo ah wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Galmudug, kaas oo uu xiriir fiican kala dhaxeeyo Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Diidmo xooggan oo la xiriirta qaabka loo maareeyey Labada Kursi ee HOPP#60 iyo HOPP#20 ayaa ka taagan Magaalada Gaalkacyo.
Ciidanka Daraawiishta Galmudug ayaa soo farageliyey xaalka Labada Kursi. Askarta qaar kamid ah waxay ku doodayaan inaan Kursiga HOPP#20 laga dhigi karin Kooto Dumar, halka qaarna ay ku doodayaan inaan la xiri karin kursiga HOPP#60.
Qorshihii ay guddiga doorashada Shalay ku shaacin lahaayeen guddiga xulista ergada Lixfaas Kursi Maanta ay ku bixin lahaayeen shahaadooyinka musharixiinta si ay Maalinta Berri ah u dhacdo doorashada ayaa shaqeyn waayey.
Askarta waxay la hadleyn saxaafadda, waxay digniin siiyeen guddiga doorashada Galmudug iyagoo ka digay inuu gacan ka hadal imaan karo haddii lagu deg dego qabashada doorashada Kuraastaas.
Xaaladda waa ka maarmi weysay inuu yimaado Qoor Qoor, Xalay kulamo ayaa ka dhacay Magaalada Gaalkacyo oo lagu xalinayo arrimahaas, waxaana la eegayaa sida uu Qoor Qoor u maareeyo xiisadda Kuraasta taalo Gaalkacyo.
26 Kursi oo Golaha Shacabka ah iyo 8 Senator oo ay Galmudug ku qabatay Magaalada Dhuusamareeb Laba Kursi oo kaliya ayaa buuq ka dhashay.